सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी कृषिबीमा
प्रकाशित मिति : 12:23 am, August 20, 2015
काठमाडौ, भदौ २ । गत आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी कृषि तथा पशुबीमालेख जारी भएको छ । कृषि तथा पशुबीमाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रु. ११ करोड अनुदान रकम अपुग भएको बीमा समितिका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘उक्त रकम गत आर्थिक वर्षको जेठमा नै सकिएपछि असारमा अनुदान रकम अपुग भएको थियो ।’ असारमा मात्रै रु. १ करोडभन्दा बढीको अनुदान रकम माग भएको उनले बताए ।
नेपालको कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न तथा कृषकको लगानी सुरक्षित गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ १ गते कृषिबीमा लागू गरेको हो । सोहीअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि बीमा समितिले पनि कृषि तथा पशुबीमालाई अनिवार्य गरेको छ । कृषकलाई कृषिबीमाका लागि प्रेरित गर्न सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा उक्त अनुदान बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । सरकारले अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि बीमकहरु पनि कृषिबीमातर्फ आकर्षित भएको समितिले बताएको छ । – आजको आर्थिक अभियानबाट